Ihe 5 iji mara Jọdan dị ịrịba ama | Akụkọ Njem
Maria | | Petra, njem
Enwere ọtụtụ ezi ihe mere ị ga-eji gaa Jọdan: ịchọpụta ogige ntụrụndụ ya, gaa na nnukwu ụlọ ya na mbara ọzara, furu efu n'okporo ámá nke Amman, see n'elu Oké Osimiri Nwụrụ Anwụ, ka Petra dị egwu rafuo ya ma ọ bụ mee njem njem njem. Enwere ọtụtụ atụmatụ ịme na mba a nke Middle East. Ọ bụkwa na mmiri ahụ pụrụ iche gbara Jọdan gburugburu ga-akpali ọtụtụ atụmanya. Yabụ, ọ bụrụ na ịnwere ohere ị ga njem ebe ahụ n’oge adịghị anya, anyị ga-agwa gị gbasara ebe ndị ahụ na-agaghị efunahụ gị n’oge nleta gị.
3 Oke Osimiri Nwụrụ Anwụ
4 Njem njem
5 Na-atụgharị uche n’obí ụlọ ịkpa
Ewubere n’elu ugwu, dịka Rome ma ọ bụ Lisbon, n’etiti ọzara na Ndagwurugwu Jọdan na-eme nri. Amman bụ otu n'ime obodo ndị kachasị na-adọrọ mmasị ma na-adọrọ mmasị na Middle East. Ọ bụ ọnụ ụzọ ámá mba ahụ na azụmahịa na azụmahịa dị mkpa.
Ihe dị ka nde mmadụ atọ bi na Amman, ọkara nke ndị bi na Jọdan. Ọ bụ obodo nwere nnukwu ọdịiche dị n'etiti nke oge a na akụkọ ihe mere eme ebe ọ bụ na ọ mepere oghere na ụzọ dị obosara kamakwa obodo ochie na-adịghị mma na nke labyrinthine.
Isi ebe nlegharị anya ya bụ Citadel, mkpọmkpọ ebe Rome, ụka Byzantine, nnukwu ụlọ alakụba nke Hussein ma ọ bụ Ebe Ndebe Ihe Ochie nke Jordan, tinyere ndị ọzọ. Jerash dị nso n'isi obodo ahụ, naanị ihe ncheta ndị Rom nwere ike ibuso Petra dị ịtụnanya ọgụ. A mara obodo Rome a na-ewu ewu na narị afọ nke mbụ dị ka Gerasa ma dị na ndagwurugwu ma gbaa ya mmiri na mpaghara osisi dị larịị. Ọbịbịa gị bụ ihe dị mkpa ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịhụ mkpọmkpọ ebe Rome kachasị mma na Middle East.
A na-ekwukarị ya dị ka ihe ijuanya nke asatọ nke ụwa oge ochie, Petra bụ akụ kachasị ọnụ ahịa nke Jọdan na ebe kachasị mkpa njem nleta. Ọkwá ya kwesịrị ekwesị ma ọ nweghị ihe ọ bụla na-akwadebe anyị maka ebe a na-awụ akpata oyi. A ghaghi ihu ka ekwenye.
Ndị Nabataea wuru ọmarịcha obodo Petra bụ ndị biri gburugburu narị afọ nke atọ BC, bụ ndị gwupụtara ụlọ arụsị, ili, obí eze, ụlọ obibi na ihe owuwu ndị ọzọ na nnukwu ugwu sandstone. Ndị a biri na mpaghara ebe ihe karịrị puku afọ abụọ gara aga wee mee ka ọ bụrụ obodo ụzọ dị mkpa nke jikọtara ụzọ silk, nke ngwa nri na ndị ọzọ jikọtara China, India na ndịda Arebia na Egypt.Siria, Gris na Rome.
Petra nwere mmasị ma n’ehihie ma n’abalị. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịse foto, oge kachasị mma iji gaa obodo ahụ bụ site n'isi ụtụtụ ruo etiti ụtụtụ ma ọ bụ n'etiti ehihie, mgbe ọchịchọ anwụ na-acha na-achapụta agba nke nkume.
Agbanyeghị, ịgaghị echefu nleta abalị nke Petra site n'ọkụ kandụl, ahụmịhe anwansị nke a ga-ebirikwa ebe ahụ. Ọ bụ ihe amamihe dị na ya ibubata uwe na-ekpo ọkụ ebe ọ bụ na ọnọdụ okpomọkụ dị ala n'abalị na ọkụ na egwu na-egosi na enwere ike ịnwe elekere atọ n'èzí.
O nwere ike ịbụ otu n'ime ebe kachasị ama n'ụwa. Ọ bụ ọdọ nke na-anaghị ewepụ mmiri dị n’etiti Israel, Palestine na Jọdan, nke ihu ya dị ihe dịka narị kilomita asatọ. Agbanyeghị, nnukwu omume ọma na ama ama ya sitere na oke mmụọ ya, nke na-eme ka ndị mmadụ na-asa ahụ na mmiri ya see n'elu n'enweghị mbọ ọ bụla.
Mgbe ị gachara, ị nwere ike ịga na ebe nsọ Lot, ebe nchekwa Mujib, Amon Valley of the Bible, ma ọ bụ spa nke ụlọ oriri na ọ luxuryụ inụ ndị dị na mpaghara iji nwee ahụmịhe pụrụ iche na mmiri ya na apịtị na akpụkpọ ahụ.
Njem njem nlegharị anya bụ otu n'ime ngalaba kachasị ike na nke ọhụụ nke ụlọ ọrụ ndị njem na Jọdan. Yabụ, ọ bụrụ na mmetụta uche siri ike bụ ihe gị, Jọdan bụ ebe ị na-aga. Na mba a, ị nwere ike ịga njem safari site na Shawmari Reserve (ebe a na-azụlite ụmụ anụmanụ na ihe egwu nke mkpochapụ), gbagoo na Wadi Rum desert n'ụgbọelu, gaa na-agagharị n'okporo Osimiri Mujib. 0 a 4 4 gafere na ndagwurugwu ọnwa. Na-ada ezigbo mma?
Na-atụgharị uche n’obí ụlọ ịkpa
Lọ ndị dị n'ọzara Jọdan bụ ihe atụ magburu onwe ya nke ụkpụrụ ụlọ na oge ochie nke Alakụba na ihe nketa nke oge na-adọrọ mmasị n'akụkọ ihe mere eme nke mba ahụ. Mosaics ya a ma ama, frescoes na stucco ihe atụ na-akọ akụkọ banyere ihe ndụ dị ka ọ dị na narị afọ nke asatọ.
A na-akpọ ha nnukwu ụlọ n'ihi oke ha dị elu, mana ogige ndị a dị n'akụkụ ọwụwa anyanwụ na ndịda Amman rụpụtara ebumnuche dị iche iche: dịka ogige ọrụ ugbo na azụmahịa, ọdụ ụgbọ ala, ọdụ ezumike na ogige ndị agha nke nyeere ndị ọchịchị mba ọzọ aka iwusi njikọ ike. na mpaghara.
Qusair Amra bụ otu n’ime mgbidi kachasị mma echekwara, agbanyeghị na ị nwekwara ike ịga leta ụlọ nke Qasr Mushatta, Qasr al-Kharrana, Qasr at-Tuba na Qasr al-Hallabat, eweghachiri na ezigbo ọnọdụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Petra » Ebumnuche 5 iji mara Jọdan dị egwu